Sajhasabal.com |आहा ! चाँदी जस्तै टल्कीएको रारा (१९ तस्बिरमा हेर्नुहोस्)
दान बहादुर बुढा | माघ २३, मुगु | पर्यटकिय नगरि रारा हिउँले ढाकेर कपास जस्तै सेताम्य देखिएको छ । आकाशबाट हिउं थपिदै जाँदा रारा कपासको फुल जस्तै आकर्षण बनेको छ ।
वरपर हिड्ने बटुवादेखि निकुञ्जमा कार्यरत नेपाली सेनादेखि कर्मचारीसम्मको मन राराले भुलाएको छ । कामको हत्तार भएपनि ५ मिनेट पर्खिेर हिउले भरिएको सेताम्य रारा हेर्ने निकै रमाउनेहरुको भिड रारामा देख्न सकिन्छ ।
रारा तालको चारैतिर कोणधारी बृक्ष कपास फुले जस्तै देखिन्छन् । बीचमा निलो र कञ्चन सफा पानी । यस्तो मनमोह र आकर्षणयुक्त दृष्य बर्षको एक चोटी हिउँ परेको बेला देख्न पाईन्छ । पुस, माघमा सेताम्य हिउँ, चैत, बैशाखमा तालै वरीवरी ढकमक फुलेका लाली गुराँस, साउन/भदौ महिनामा फुल्ने बिभिन्न थरीका सप्तरंगी फुलले राराको शोभा बढाउने गरेको छ ।
रात भरि हिउ परेर पछिल्लो दिन आकाश खुल्दा त आहा ! रारा क्या राम्रो कपास फुले जस्तै देखे हेरिटे होटलका मालिक राज बहादुर कार्कीले भने “बिस्तारै सूर्य उदाउदै जादा रारा त झन चाँदी जस्तै टल्कीयो” ।
हिउँले सेताम्य भएको रारालाई क्यामेरामा कैद गर्दै थाकियो पन्तले भने “वरपर हिड्ने बटुवाले पनि फोटो खिच्दै हिड्छ्न् । उनले भने बृहत निलो तालमा वारीपारी हिउँले ढाकेपछि स्वर्ग जस्तै हुदो रहेछ । हिउँले हवाई र सडक मार्ग अबरुद्ध हुदा नराम्रो महसुस भएपनि सेताम्य रारा हेर्दे बस्नु परेको गुल्मपतिको भनाई छ । हिउँ परेको बेला तालको पानी असाध्य तातो हुदा सरसफाई गर्न सजिलो हुने गरेको छ ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका बिभिन्न प्रजातिका चराहरुले रुखबाट हिउँ खसालेर रारालाई जिस्क्याई रहेको जस्तो आवाज सुनिन्छ । घामले टल्काईरहेको सेताम्य राराको दृश्य हेर्न असल माछा उफ्रि रहेका हुन्छन् । ताल वरिपरिका कोणधारी रुखहरु दुई पटको हिउँले निहुरीएका छन । कोही रुखहरु हिउँ धान्न नसकि हाँगा भाँचिएका छन । रुखबाट कौवा, ढुकुर कालिजले हिउँ खसाल्दा जनावर तर्सिएर भाग्छन् ।
हिउँको जाडोले थरथरी मुटु कमाए पनि रारामा सेताम्य हिउँले असाध्यै रमाईलो लाग्ने गरेको छ । ताल वरिपरि कपास फुले जस्तै रुख हेर्न निकै आनन्द आउछ हिजो आज रारा आउदा संसार भुलीने गरेको नेपाल पत्रकार महाँसंघ शाखा मुगुका अध्क्षय नृपेन्द्र बहादुर मल्लले बताएका छन ।
हिजो आज राराका हिँउमा रमाउन आएका सामानिक अभियानता बासु रावलका अनुसार राज्यले रारालाई अन्य मनोरन्जनात्मक पूर्वधारको बिकासमा जोड दिएको देखीदैनन् । गएको बैशाख महिना कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन बर्ष शुभारम्भ गरेको छ । बर्तमान सरकारका प्रधान मन्त्री केपी शर्माओलीले रारा तलको छेउमा बसी राराको बिकास गर्नको लागी सरकार र आफु अघी लागेको देश बासीका नाममा जानकारी दिए पनि अहिलेसम्म राराको बिकासको लागी गुरुयोजना नबनाईएको रारा तालको बिकासकोलागी कुनै निकाय बाट पहल नदेखीएको बताउन्छन ।
सेताम्य राराको सौदन्र्य हेर्न तिब्बत मानसरोवर र भारत साइबेरिया तालबाट हाँस, करयाङकुरुङका सयौ बथानहरु पाहुनाको रुपमा रारा आएका छन् हिउँ पग्लिए संगै गर्मी शुरु भएपछि फेरी उतै फर्किन्छन् ।
समुद्री सतह देखि २९ सय ९० मिटर उचाईमा रहेको राराले दुई थरि इतिहास बोकेको छ । छा“यानाथ शिव ज्यूको पूजाको लागि राखिएको पानीको ओमखरा भनेर चिनिन्छ । डुङ्गा चढेर सेनाको क्याम्प बाट पारि मिलिचौर उत्रिन टपक्कै तीन लाग्ने र ताल वरिपरि एक तर्फी फन्को मार्ने करिव ६ घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने मुमार्का पर्यटक ब्यावसाय देबिकृण रोकायाले बताए ।
राराको लम्बाई ५ हजार मिटर, चौडाई ३ हजार मिटर र गहिराई १ सय ६७ मिटर रहेको छ । कवि महेन्द्र बीर बिक्रम शाहले रारा लाई स्वर्ग कि अप्सरा भनेर कबिता उल्लेख गरेका छन् । असार साउ“न महिनाका सप्तरङ्गी फुल माथि भमरा र माहुरीको गुनगुन आवाजले राराको सौन्दर्य झनै आनन्दमय हने गरेको र बिभिन्न चराहरुको आवाजले गुन्जायमान बनाउ“ने गरेका छन ।
राराको अर्को बिशेष्ता बिश्वमा दुर्लभ असला जातका माछा, रानी ट्राउट भ्यागुत्तो रहेको छ । भने डा“फे, कालीज, लाटोकोसेरो,ढुकुर, चिल, हा“स लगायत ३ सय प्रजातिका चराहरुको बास्थान रहेको छ । कस्तुरी, रेडपाण्डा, मृग, घोरल, भालु, झारल, स्याल, रतुवा, लगायत बन्यजन्तु सहित गुच्ची च्याउ“,पा“च औले, जटामासी जडिबुटी पाइने गरेको निकुञ्जको कार्यालयले जनाएको छ ।